Fepetra fitsangatsanganana mba hanamorana ny 5 Jolay ho an'ny Kanadiana vita vaksiny tanteraka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Fepetra fitsangatsanganana mba hanamorana ny 5 Jolay ho an'ny Kanadiana vita vaksiny tanteraka
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny faha-5 Jolay amin'ny 11:59 alina dia votsotra ny kanadianina vita vaksiny feno sy ny mponina maharitra EDT amin'ny quarantine hotely sy ny quarantine 14 andro tsy maintsy atao.
Ny fanovana dia tsy maharaka ny tatitry ny Governemanta manokana momba ny Panel.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe any Canada dia mitaky drafitra fanombohana feno hanokatra indray ny sisin-tany ary hifarana amin'ny fanambarana tsikelikely.
Tsy toy ny firenena maro hafa, mbola manome drafitra famerenana mazava i Canada
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe any Canada dia nanamarika ny fanambaran'ny governemanta federaly androany tamin'ny 5 Jolayth amin'ny 11:59 alina EDT vitan'ny Kanadianina vita vaksiny feno sy ny mponina maharitra dia tsy ho afa-miaina amin'ny karantina hotely sy ny quarantine 14 andro tsy maintsy atao. Saingy naverin'ny indostria ny fiangavian'izy ireo fa tena mila drafitra fanombohana mazava sy feno momba ny dia iraisam-pirenena i Canada, ary hampitsahatra ny fanambarana iray monja momba ny fanovana ny politika momba ny karantina sy ny sisintany.
“Ny fanalefahana ny fameperana ny quarantine ho an'ny kanadianina vita vaksiny feno sy ireo mpandeha mahay dia dingana iray mankany amin'ny lalana marina, saingy tsy mahatratra ireo tolo-kevitra nomen'ny tatitra momba ny Expert Advisory Panel momba ny Health Canada tamin'ny volana lasa teo. Manohy mandà ny hanome ny Kanadiana drafitra famerenana mazava sy feno ny governemanta amin'ny famaritana ny fomba handraisana ny fepetra amin'ny tatitra. Raha efa nanova ny fepetra noraisin'izy ireo ny mpitsidika kanadiana ireo firenena hafa toa an'i Frantsa dia mbola tsy manana drafitra na fe-potoana mazava any Canada izahay, ”hoy i Mike McNaney, filoha sady CEO an'ny National Airlines Council of Canada, izay misolo tena ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any Canada (Air Canada , Air Transat, Jazz Aviation, ary WestJet).
Ny tatitra momba ny Health Canada Advisory Panel, nomanin'ireo manam-pahaizana momba ny epidemiolojia, virolojia ary koa fanadihadiana an-tsokosoko, dia fanadihadiana sy siantifika miorina amin'ny siantifika izay mitaky fanovana isan-karazany momba ny fivezivezena sy ny sisin-tany ary anisan'izany ny fanafoanana ny quarantine ho an'ireo mpandeha feno vaksiny. fanafoanana ny quarantine hôtely ho an'ny mpandeha rehetra, fihenan'ny quarantine ho an'ireo mpandeha vita vaksiny sy tsy vita vaksiny, ary ny fampiasana fitsapana antigen haingana. Na dia nahatratra lasibatra fanaovana vaksiny 75% / 20% aza i Canada, ny fanambarana natao androany dia tsy niresaka momba ireo fepetra ireo.
Nanamarika ihany koa i McNaney fa ny fepetra takian'ny governemanta fa ny zaza latsaky ny 18 taona izay tsy vita vaksiny tanteraka dia tokony hanaraka ny quarantine 14 andro mifanohitra amin'ny fomba nataon'ny firenena hafa. “Imbetsaka ny governemanta no milaza fa miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika iraisam-pirenena izy ary manaraka ny siansa, nefa kosa manohy ny fandraisana andraikitra toy ny quarantine mandatory ho an'ny zaza tsy ampy taona izay tsy mifanaraka amin'ny faritany hafa. Raha ny marina, ny politika dia mifanohitra mivantana amin'ny tolo-kevitra navoaka tamin'ny 17 Jona nataon'ny Ivon-toerana Eoropeana misahana ny fisorohana sy ny aretina ary ny maso ivoho misahana ny fiarovana ny sidina eropeana ”hoy izy.
"Tsy toy ny firenena maro hafa ao anatin'izany ny mpiara-miasa amin'ny G7, mbola tsy nanome drafitra mamerina ny famerenana amin'ny laoniny mazava tsara ny Canada rehefa hamarana ary rahoviana no hesorina ny fameperana ny fivezivezena sy ny sisin-tany, indrindra ho an'ireo mpandeha vita vaksiny feno avy any amin'ny firenena vahiny, ary ny fomba hanekena ny tolo-kevitr'i Panel . Rehefa mitombo haingana ny programa fanaovana vaksiny ary manome fahefana mazava ho an'ny mpanjifa sy ny indostria ny fanapahana manerantany, dia tokony hanao toy izany koa isika. Ireo firenena izay nametraka tamim-pahombiazana ny siansa sy ny fitsipiky ny fitsinjaram-pahefana ary ny fiarovana ny quarantine dia tsy hiarovana ny fahasalamam-bahoaka ihany koa fa hitondra ny fahasitranany any an-toerana amin'ny ankapobeny ary handray asa sy fampiasam-bola avy amin'ireo firenena tsy manao izany. Tsy maintsy mihetsika isika izao ", hoy i McNaney namarana.